December 2019 - Page4of 23 - Myanmar Fire Services Department
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ ရွှေမြိုင်သီရိ ရပ်ကွက်၊ မျှော်လင့်လမ်း၊ မျှော်လင့်လှေဆိပ်၊ အတ္ထရံမြစ်အတွင်း နစ်မ� ....
editor | Dec 25, 2019 | News, ထူးခြားဖြစ်စဉ်, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
(၂၄.၁၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၁၁ ၄၅)အချိန်ခန့်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ ရွှေမြိုင်သီရိ ရပ်ကွက်၊ မျှော်လင့်လမ်း၊ မျှော်လင့်လှေဆိပ်၊ အတ္ထရံမြစ်အတွင်း ယာဉ်မောင်း ဒေါက်တာ အေးဇော်ထွန်း မောင်းနှင်သော ယာဉ်အမှတ် YGN(3L-9150) TOYOTA WISH ခဲရောင်ယာဉ်သည် အတ္ထရံမြစ်အတွင်း...
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက်မြို့နယ်၊ ကြေးနန်းရပ်ကွက်၊ ကြံခင်းကျေးရွာတွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
editor | Dec 25, 2019 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
(၂၄. ၁၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၂၁ ၁၅)အချိန်ခန့်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက်မြို့နယ်၊ ကြေးနန်းရပ်ကွက်၊ ကြံခင်းကျေးရွာလမ်းခွဲနေ ပိုင်ရှင် ဒေါ်ဂျာဝါထုဘူ၏ (၁၅×၁၅)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ထရံကာ၊ မြေစိုက်နေအိမ်တွင် မီးဖိုမီးကြွင်းမီးကျန်မှတစ်ဆင့် အနီးရှိထရံသို့ မီးကူးစက်လောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း...
ရှမ်းပြည်နယ်၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ ကန်သလက်ကျေးရွာ၊ စက်သုံးဆီဆိုင်ရှိ ဆီပေပါမီးလောင်မှုသတင်း
(၂၄. ၁၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၁၅ ၁၅)အချိန်ခန့်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ ကန်သလက်ကျေးရွာ၊ ကေသရာဇာဆီပန့်သို့ ယာဉ်မောင်း ဦးကျော်မြင့်နှင့် ယာဉ်နောက်လိုက် သက်မင်းထွေးတို့ မောင်းနှင်လာသော ယာဉ်အမှတ် SHN (7J-9439)Sino Truck (အဖြူရောင်)ယာဉ်ဖြင့် ပါရှိလာသော ဆီပေပါများမှ 92...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ၁၄)ရပ်ကွက်၊ တပ်မတော် စစ်ကြောရေးနှင့် တည်းခိုရေးစခန်းအနီးတွင် မော်တော်ယာဉ်( ....
(၂၄.၁၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၁၄ ၁၅)အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်မြို့နယ်တွင် ယာဉ်မောင်း ကိုနိုင်လင်း မောင်းနှင်လာသော ယာဉ်အမှတ် YGN(8D-6445)Toyota Light Truck အဖြူရောင်ယာဉ်သည် လှိုင်ဘက်မှ မရမ်းကုန်းဘက်သို့ ဘုရင့်နောင်လမ်းအတိုင်း မောင်းနှင်လာစဉ် လှိုင်မြို့နယ်၊...
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စလင်းမြို့နယ်၊ တမာချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တမာချောင်ကျေးရွာတွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
(၂၄.၁၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၁၂ ၁၅)အချိန်ခန့်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စလင်းမြို့နယ်၊ တမာချောင်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ တမာချောင်ကျေးရွာနေ အိမ်ရှင် ဦးသန်းတိုးအောင်၏ (၁၈×၁၄)ပေ၊ သက်ငယ်မိုး၊ ထရံကာ၊ ဝါးကြမ်းခင်းနေအိမ်တွင် မီးဖိုမီးကြွင်းမီးကျန်မှတစ်ဆင့် အနီးရှိအကာသို့ မီးကူးစက်လောင်မှု...
Page4of 23« « Previous...23456...1020...Next »
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ အမှတ်(၃၈)တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ ပိန်းဆန်းရပ်ကွက်တွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပွား
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်တွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပွား
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့၊ ကွေ့ကြီးရပ်ကွက်၊ မာလာလမ်းတွင် သစ်ပင်လဲကျမှုဖြစ်ပွား
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း) မြို့နယ်၊ (၆၇)ရပ်ကွက်၊ ရတနာအိမ်ရာ၊ အပိုင်း(စီ)၊ ရတနာအိမ်ရာကျောကပ်လမ်း� ....